लघुकथा :- समाज सेवा
"ए बुढा ! जानु न, यसो कुनै दुध डेरी खुला छन् कि ? सानो छोरो र आमालाई त सकेसम्म नटुटाऔं एक मुठी दुध खानबाट!"
७ बजे बिहान उठ्नासाथै श्रीमतीको हुकुम आएकोले म दुध किन्न भनी मास्क र पञ्जा लगाएर सेनेटाइजर बोकी डेरीतिर लागें । भर्खरै ताजा दुध आएको रहेछ । २ लिटर दुध लिएर बाटोमा आउँदै थिएँ। दुई जना मास्क र पञ्जा लगाएका अधबैंसेले भने -" दाइ एकछिन रोक्नुस् त ! हजुरको एउटा सानो सहयोग चाहियो हामीलाई ।"
मैले पनि अलि दुरी कायम गर्दै भनें -" भन्नुस् न, म के सेवा गर्न सक्छु ? सकेको गरौंला नि !"
मेरो कुरा सुनेर एउटाले मलाई भन्यो-"एकैछिन यो मेरो सामान लिनको लागि हात अगाडि बढाउनुस् न ?"
म पनि त्यत्ती जाबो सहयोग पो रहेछ भन्ने सोचेर दुधको पोको सँगसँगै हात अगाडि बढाएँ। क्यामरामा दुईटा फोटो खिचिक्क पारे । अनि मलाई धन्यवाद भन्दै मोटरसाइकलमा हुइँकिए ।
हिँड्दै जाँदा १५ मिनेटमा म घर पुगें ।गेटमै श्रीमतीले राता राता आँखा पल्टाउँदै मलाई खुब घुरेर हेरी । ढिलो भएकोले रिसाइछ यो बुढि । छोरोले दु:ख दियो होला ! भन्ने सोंच्दै भित्र पसें। आमाले सम्झाउँदै भन्नु भयो -" बाबु !दुध पाएनस् र किन्न ? तेस्तो गरीबको लागि बाँडेको दुध पो बोकेर आइस् ? "
म आमाको कुरा बुझिन र सोधें -" के भन्नु भो आमै ! कुरो बुझिन ।" मेरो कुरो सुनेपछि श्रीमतीले ठुस्किँदै मोबाइल देखाई । त्यहाँ त अघि भर्खरै ती अधबैंसेले खिचेको दुधको पोको हातमा लिएको मेरै फोटो पो रहेछ । दङ्ग पर्दै स्टाटस् पढेँ । स्टाटस् यस्तो थियो -" लकडाउनको अवस्थामा केही दु:ख पाएका व्यक्ति र बालबच्चाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर २,२ लिटर दुध र केही खाद्यान्न बाँडियो ।"
चक्र बमको `ओई काजल´ चोरेको आरोप कपि राईट लाग्दै
गोसाइँ ! ‘मेरो राहत खोई ?’
पसिना बेच्न सकिन्छ, आमा होइनः वर्षा राउत